Diabetes – Page 8 – Healthy Life Journal
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ပျောက်ကင်းနိုင်သလား (၁)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဟာ ဖြစ်လာပြီးရင် ပြန်မပျောက်နိုင်ဘူးလို့ ပြောပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။UKPDS လို့ခေါ်တဲ့ ယူကေနိုင်ငံမှ အမျိုးအစား(၂) ဆီးချိုသွေးချိုလူနာတွေကို လေ့လာထားတဲ့ သုတေသန ရဲ့ အဆိုအရ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပဲ ကုကု ဆီးချိုသက်ရင့်လာတာနဲ့အမျှ ဆီးချိုရောဂါဟာ မလွဲမသွေ ပိုပြီးဆိုးလာမှာပဲ။ မုန့်ချိုအိတ်ရှိ အင်ဆူလင်...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တို့အတွက် တစ်နေ့တာ စားသောက်နေထိုင်မှုပုံစံ
ပါမောက္ခဦးကိုကို(ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှင်တွေက တစ်နေ့ ထမင်း ဘယ်လောက် စားရမလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ အဝလွန်သူတွေအတွက် ထမင်းကို လက်ဖက်ရည် ပန်းကန်လုံး သုံးလုံးခန့် စားနိုင်ပါတယ်။ ပိန်သူတွေအတွက်ကတော့ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး သုံးလုံးထက် ပိုစားနိုင်ပါတယ်။...
အမျိုးသမီးများနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ (၂) (Women and Diabetes)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချို ရှိ၊ မရှိ ဘယ်သူတွေမှာ စစ်ဆေးသင့်သလဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်း ဆီးချိုသွေးချိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေ ( Risk Factor) ရှိတဲ့ သူတွေဆိုရင်တော့ ပိုစစ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ -မျိုးရိုး(မိဘ၊မောင်နှမ)မှာ ဆီးချိုရှိသူများ၊ -၉ ပေါင်ကျော်ကလေး...
အမျိုးသမီးများနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ (၁) (Women and Diabetes)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ကမ္ဘာ့ဆီးချိုသွေးချို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနေ့ကို နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့၌ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ကျင်းပကြပါတယ်။ နိုဝင်ဘာတစ်လလုံးမှာ ရက်တစ်ရက်ရွေးပြီး ကျင်းပနိုင်ပါတယ်။ ယခုနှစ်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကတော့ “Women and Diabetes : our right to...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် လေငန်းရောဂါအကြောင်း (၅)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် လေဖြတ်တာရဲ့ သမရိုးကျကုထုံးတွေကတော့ လူနာအသက်ရှင်ရေးနဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဦးနှောက်ကို ပိုမဆိုးအောင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ရေနဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေဖြည့်ပေးခြင်း၊ အဖျားပိုး၊ ဆီးပိုး မဝင်အောင်ပြုစုခြင်း၊ အိပ်ရာနာမပေါက်အောင် ကိုယ် ခန္ဓာလှည့်ပေးခြင်း၊ ဆီးဝမ်းတွေ သွားလို့ရအောင် ပြုစု...
ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါ ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်ပုံ
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) (အတွင်းရေးမှူး-ရွှေရောင်နှင်းဆီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်ပုံကို သိပါရစေရှင့်။ ကျွန်မ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နေသည်မှာ ၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ အစားလည်းမရှောင်ပါ။ ကြောက်ရမှန်းလည်းမသိပါ။ စားပြီး ဆေးတော့ပုံမှန်သောက်ပါတယ်။ အခုအခါ သွေးတိုးလာပါတယ်။ နှလုံးလည်း အဆီချဆေးသောက်နေရပါတယ်။...
HbA1C ဆိုတာ . . .
မေး ။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်စစ်ရင်း ဆရာဝန်က HbA1C စစ်ဖို့ပြောပါတယ်။ HbA1C ဆိုတာ ဘာကို ခေါ်တာပါလဲ။ ဘယ်လို အကျိုးရှိပါသလဲ။ ဒေါ်မြင့်မော်၊ မန္တလေး။ ပါမောက္ခဦးကိုကို(ဆီးချိုနှင့်အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသည် ။ ဖြေ ။...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် လေငန်းရောဂါအကြောင်း (၄)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) သွေးတိုးခြင်းနှင့် လေငန်းရောဂါ ဆီးချိုလူနာတွေမှာ သွေးချိုထိရောက်အောင်ထိန်းတာနဲ့စာရင် သွေးတိုးကိုထိရောက်အောင် ထိန်းထားနိုင်တာက လေဖြတ်တာကို သိသိသာသာပိုပြီး လျော့ကျစေပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူအဖို့ သွေးတိုးကို ဘယ်လောက်မှာထားရမလဲဆိုရင် အပေါ်သွေး ၁၃၀ မှ ၁၄၀ အထိနဲ့ အောက်သွေး ၉၀...
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနှင့် လေငန်းရောဂါအကြောင်း (၃)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး(ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဆီးချိုရောဂါရှိသူတစ်ယောက်ဟာ ဆီးချိုမရှိ သူထက် လေဖြတ်ဖို့ အလားအလာ နှစ်ဆပိုရှိပါတယ်။ လေငန်းကိုပိုဖြစ်စေတာက သွေးချိုတဲ့အပြင် သွေးတိုးနဲ့ သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ထိန်းဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါရှင်တစ်ယောက်မှာ ဒီသုံးချက်ဟာ အမြဲဒွန်တွဲပြီး ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ သွေးတိုးရှိခြင်းနဲ့...